खजुरामा जेष्ठ नागरिकको सम्मान - Sadarline
खजुरा (बाँके) : खजुरा गाउँपालिका वडा नं. ३ ले जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेको छ । ७५ बर्ष भन्दा माथिका १ सय १० जना जेष्ठ नागरिकलाई न्यानो कम्मल र बाटो खर्च १ सय नगद रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको हो ।
वडा नं. ३ का बृद्धबृद्धा जेष्ठ नागरिकलाई एक कार्यक्रमका बीच खजुरा गाउँपालिका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिले सम्मान स्वरुप एक थान न्यानो कम्मलसहित नगद १ सय रुपैयाँ दिएर सम्मान गरे । उनले खजुरा गाउँपालिकाले ८ वटै वडाका जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्दै आएकोे र भबिष्यमा पनि गर्दै जाने बताए ।
पौष १६ गतेदेखि ८ वटै वडाका जेष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरि निःशुल्क स्वास्थ्य शिबिर सञ्चालन गर्ने प्रमुख कक्षपतिले जानकारी दिए । उनले स्वास्थ्य शिबिरमा जेष्ठ नागरिकको आँखा, कान, रक्तचापलगायतका रोगहरुको बिशेषज्ञ डाक्टरबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिने बताए ।
गाउँपालिकाको सेवा प्रबाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमले टेवा पुग्नेमा वडा नं. ३ का अध्यक्ष कान्तुराम गौतमले विश्वास ब्यक्त गरे । उनले खजुरा गाउँपालिकाले जनताले पाउने सेवा सुबिधामा कुनै कमी नहुने बताए ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष कक्षपति, उपाध्यक्ष एकमाया बिक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसी र वडाध्यक्ष गौतमले जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान गरेका हुन ।
सदरलाइनडटकम, दाङ : आगलागी हुँदा दाङमा एक बालकको मृत्युभएको छ । जनावर भगाउनका लागि बनाएको अट्वामा आगलागी हँुदा बबई गाउँपालिका ७ मलैखोलाका १० बर्षीय राजु घर्तीको जलेर मृत्युभएको हो । अट्वामा सुतेका बालक घर्ती रातमा तातो गराउनका लागि बालेको आगो अट्वामा सल्किएपछि जलेर मृत्यु भएको हो । शनिवार राती १२ बजे […]
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार १४:१४